သံလွင်(CEP)နှင့် Triangle Women’s Support Group တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့် အခင်းအကျင်းသစ်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏အခန်းကဏ္ဍ ဖိုရမ် (သထုံမြို့ ၊ မွန်ပြည်နယ်။) – Than Lwin
သံလွင်(CEP)နှင့် Triangle Women’s Support Group တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့် အခင်းအကျင်းသစ်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏အခန်းကဏ္ဍ ဖိုရမ် (သထုံမြို့ ၊ မွန်ပြည်နယ်။)
မွန်ပြည်နယ်၊သထုံမြို့မှာ Forum နှစ်ရက်ပြုလုပ်
အခင်းအကျင်းသစ်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏အခန်းကဏ္ဍ ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်မနက်ပိုင်းမှာ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်းနဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တောင်သူလယ်သမားများအခန်းကဏ္ဍခါင်းစဉ်နဲ့ ဦးငြိမ်းဇာနည်နိုင်က ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပါတယ်။
နေ့လယ်ပိုင်းမှာ ဒေါ်ခင်လေးက good society & women ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
Than Lwin(CEP)နဲ့ Triangle Women’s Support Group အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်တဲ့ဖိုရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖိုရမ်သို့ NLDအဖွဲ့ဝင်များ၊ ၈၈ ပွင့်လင်းအဖွဲ့အစည်း၊ ကရင်နှင့်မွန်စာပေနှင့် ယဉ်ကျးမှုအဖွဲ့များ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းနှင့် CSO များ၊ဒေသခံတောင်သူများ ၁၂၀ ဦးခန့် တက်ရောက်ပါတယ်။
Previous Post: Development Challenges in Burmer
Next Post: အမြိုးသားမွအေသုံးခမြှုမူဝါဒ၊ လယျယာမွဥေပဒေ၊ မွလှေတျမွလေပျနှငျ့ မွရေိုငျးမြားစီမံခနျ့ခှဲရေးဥပဒေ တို့အပျေါလလေ့ာဆနျးစဈခွငျး ဆှေးနှေးပှဲဖိတျကွားလှာ
tadalafil) https://tadalisxs.com/ otc tadalafil
is hydroxychloroquine safe https://hydroxychloroquinex.com/ hydroxichloraquin
is chloroquine an antibiotic https://chloroquineorigin.com/ chlorowuine
erectile dysfunction causes https://plaquenilx.com/ erectile male dysfunction
zitromax 500 mg https://zithromaxes.com/ zithromax treatment
megalis tablets megalis 20 reviews
high5casino real slots https://casinoxsonline.com/ new years eve casino
downstream casino free room coupon https://casinoxsbonus.com/ vegas slots casino free
free slots of vegas casino no download https://casinoxsplay.com/ casino no deposit code
new casino owners libby, mt https://casinoxsgames.com/ games like casino moons
what is the best casino game in tunica mississippi https://casinoxsbest.com/ google play logo quiz mania casino studio answers
chloroquine natural sources https://aralenchloroquinex.com/# chloroquine phosphate vs chloroquine sulphate
generic prednisolone without insurance in USA
QCUbOV https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx
chloroquin side effects https://chloroquineorigin.com/# hydroxycholorquin
Directory enquiries http://porntubereview.online ixxx It hasn’t seemingly quite made that much of an overall impact on Facebook’s revenues, however. Facebook announced in January of this year that $5 million of the $256 million it made from Facebook-related payments came from non-game sources, including Gifts and promoted posts – the latter taking the lion’s share of that figure.
hydroxychloroquine clinical trial chloroquine generic what are the side effects of taking hydroxychloroquine?